यो सिजन यी ४ युरोपियन क्लबलाई कसैले रोक्न सक्ला ? | Hamro Khelkud
यो सिजन यी ४ युरोपियन क्लबलाई कसैले रोक्न सक्ला ?
काठमाडौं – युरोपेली लिगहरु सुरु भएको भर्खर लगभग दुई महिना भएको छ । त्यसैले धेरै टाढाका नतिजाहरु अनुमान लगाउन कठिन नै पर्छ । तर बिहानको समयले दिनको सङ्केत गर्छ भनेझैँ यी ४ युरोपेली क्लबहरुको अहिलेको उत्कृष्ठ लयका कारण यिनलाई यो सिजन कसैले रोक्न नसक्ने नै देखिन्छ ।
पेरिस सेन्ट जर्मन (पिएसजी)
लिग – फ्रान्सेली लिग १
लिग रेकर्ड: खेल-९ जित-८ बराबरी-१ गोल-२९
सर्वाधिक गोलकर्ता – एडिन्सन काभानी (११ गोल)
गत साल लिग १ को दोस्रो स्थानमा चित्त बुझाएको पिएसजी यस सिजन निकै आक्रामक खेल पस्किँदै आएको छ । यसको श्रेय उसका दुई नयाँ खेलाडीहरु – नेयमार र किलियन बाप्पेलाई पनि जान्छ । उनीहरुले स्ट्राइकर काभानीसँग गरिरहेको तालमेल हेर्नलायक देखिन्छ ।
यस सिजन अपराजित रहेको पिएसजी केवल ९ खेलमै दोस्रो स्थानमा रहेको साविक विजेता मोनाकोभन्दा ६ अंकले अगाडि रहेको छ । पिएसजीको लिगसहित यस सिजन च्याम्पियन्स लिग पनि जित्ने लक्ष्य अहिलेदेखि नै प्रष्ट देखिन्छ ।
लिग – स्पेनिश ला लिगा
सर्वाधिक गोलकर्ता – लियोनल मेस्सी (१३ गोल)
लिग रेकर्ड: खेल-८ जित-७ बराबरी-१ गोल-२४
पिएसजी जस्तै बार्सिलोना पनि अघिल्लो सिजन लिगमा दोस्रो स्थानमा परेको थियो । यस सिजन भने उसले साविक विजेता रियल म्याड्रिडको खराब सुरुवातको पनि फाइदा उठाइरहेको छ । बार्सिलोनाको प्रदर्शनका नायक रहेका छन् अर्जेन्टिनी फरवार्ड लियोनल मेस्सी ।
मेस्सीले घरेलु लिग र च्याम्पियन्स लिगमा कुल १३ गोल गर्दै आक्रमणमा पिएसजी प्रस्थान गरेका नेयमारको अभाव खड्किन दिएका छैनन् । बार्सिलोना हाल दोस्रो स्थानमा रहेको भ्यालेन्सियाभन्दा ४ अंक र प्रतिद्वन्दि रियल म्याड्रिडभन्दा ५ अंकले अगाडि छ । यस सिजन रक्षात्मक रुपमा पनि बार्सिलोना निकै बलियो देखिएको छ ।
लिग – इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग
सर्वाघिक गोलकर्ता – सर्जियो अगुएरो/रहिम स्टेर्लिङ/ग्याब्रियल जेसस (७ गोल)
लिग रेकर्ड: खेल-८ जित-७ बराबरी-१ गोल-२९
अघिल्लो सिजन पेप ग्वार्डिओला पहिलो पटक प्रशिक्षकका रुपमा तेस्रो स्थानमा परेका थिए । यस सिजन भने पछिल्ला ३ लिग खेलमा १७ गोल गरेको सिटीलाई रोक्न निकै मुश्किल देखिन्छ । सिटीका लागि स्टार खेलाडी अगुएरो चोटिल रहँदा पनि टोलीले यस साता ७ गोल गरेको उदाहरणले सिटीको आक्रमणको स्तर त बताउँछ नै ।
त्यसका साथै ग्वार्डिओलाले थुप्रै रकम खर्चेर बलियो बनाएका डिफेन्स पनि प्रभावशाली देखिन्छ । हुन त उसको प्रतिद्वन्दि म्यानचेस्टर युनाइटेड पनि यस सिजन अपराजित नै रहेको छ तर अहिलेको लागि सिटीको आक्रमणको युरोपमै कुनै जोड देखिँदैन ।
लिग – इटालियन सेरी-आ
सर्वाधिक गोलकर्ता – ड्राइस मर्टेन्स (८ गोल)
लिग रेकर्ड – खेल-८ जित-८ गोल-२६
युरोपका शीर्ष ५ लिगमा शतप्रतिशत नतिजा कायम गरेको नेपोली एक मात्र टोली हो । गत सिजन अन्य तीन क्लबहरुझैं नेपोली पनि उपाधि जित्नबाट वञ्चित भएको थियो । तर डिफेन्स र अट्याक दुवैमा निकै सुधार गर्दै नेपोलीले आफुलाई एक प्रबल दाबेदारको रुपमा उपस्थित गरेको छ ।
बेल्जियमका ड्रायस मर्टेन्सले यस सिजन ८ गोल गरिसकेका छन् भने इटालीका लोरेन्जो इन्सिन्याले ३ गोल र ४ असिस्ट गर्दै उत्कृष्ठ प्रदर्शन गरिरहेका छन् । यस सिजन युभेन्टस र इन्टर मिलान लगायत टोलीहरुले नेपोलीलाई हराउन सांच्चै चुनौतिपूर्ण हुने छ ।